२७ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिने सरकारको योजना - Media Campaign Against Covid19
२७ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिने सरकारको योजना
१० फाल्गुन २०७७, सोमबार ०९:४९
सेरम इन्ष्टिच्युटबाट २० लाख डोज खोप खरिदका लागि सरकारले रकम पठाइसकेको छ । बाँकी १० लाख खोप नेपालले माग गरेको समयमा उपलब्ध गराउने सहमति भएको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. भीमसिहं तिकंरी बताउँछन् ।यसअघि भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख डोज कोभिशिल्ड खोपबाटै नेपालमा माघ १४ गतेदेखि खोप अभियान सुरु भएको थियो । अहिले खरिद गरेको थप १० लाख डोज खोप उपलब्ध भएपछि अभियान निरन्तर चल्ने भएको छ र सरकारले समुदायस्तरमै पुगेर नागरिकलाई खोप दिनेछ ।
‘तथ्यांकमा भएका सबै मानिस आउने/नआउने अर्को कुरा तर हाम्रो योजना २७ लाख नागरिकलाई खोप दिने हो’ डा. अधिकारीले भने ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना महामारीको जोखिममा वृद्ध वृद्धा र दीर्घरोगीहरु बढी छन् । त्यसैले ६० वर्षमाथि उमेर समूहका सबैले खोप लगाउन मिल्ने खोप महाशाखा प्रमुख डा. गौतम बताउँछन् । ‘रगत पातलो बनाउने औषधि खाएका, संक्रमण भएको ८ हप्ता ननाघेका र खोप/औषधिको गम्भीर एलर्जी हुनेबाहेक अरु सबैले खोप लगाउन मिल्छ’ उनले भने ।